दुर्गममा चिकित्सक, उपकरण नहुँदा काममा समस्या « प्रशासन
काठमाडौँ । सरकारले देशका सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तीमा दुई चिकित्सक पठाइसकेको जनाएको छ । हाल देशभरका १९८ स्वास्थ्य केन्द्रमा स्थायी, अस्थायी र छात्रवृत्तिका चिकित्सक पठाइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासनका शाखा अधिकृत प्रेमलाल दुवाले धेरै स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक गइसकेको बताए । उनले भने, “चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले मेडिकल अफिसर आठौँ तहमा २०२ र १७९ अस्थायी चिकित्सक नियुक्त गरी स्वास्थ्य केन्द्रमा पठाइसकेको छ । तर अस्थायी चिकित्सक माग गरे जति आउँदैनन् । विशेषज्ञ चिकित्सक नौ तहमा हामीले १५९ जना मागेका थियौँ, १२८ निवेदन प¥यो । त्यसमा पनि अहिलेसम्म ४० जनाले मात्र पत्र बुझी जिल्ला गएका छन् ।”
सरकारले एउटा स्वास्थ्य केन्द्रमा दुई चिकित्सक पठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाको सबै स्वास्थ्यमा चिकित्सक पु¥याउने, उपकरण र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिएको भनाइ छ । मुगु जिल्ला अस्पतालमा स्थायी नियुक्त लिएर पुग्नुभएका डा. जितेन्द्र कँडेल दुर्गममा आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव मुख्य समस्या भएको बताए । उनले भने, “दुर्गममा मुख्य समस्या उपकरणको हो । आएका उपकरण पनि कतिपय प्रयोग नै नभएर स्टोरमा थन्किएको अवस्थामा छ । चाहिने चीजको मतलब नै धेरै परिवर्तन हुन नसकेको हो । दुर्गममा बाटोघाटो, पानी, बिजुली सबैको अभाव छ । दुर्गममा सोचभन्दा दयनीय स्थिति छ ।”
दुर्गममा बाटोघाटो, पानी, बिजुली सबैको अभाव छ । दुर्गममा सोचभन्दा दयनीय स्थिति छ ।
यसै वर्ष नियुक्ति लिएर जिल्ला पुगेका चिकित्सक मुख्यतयाः गर्भवतीका लागि चिकित्सक नहुँदा धेरै समस्या भोग्नु परेको अनुभव सुनाएका छन् । केशरापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बैतडीमा गत फागनुमा नियुक्ति लिएर पुग्नुभएका डा. जीवन कार्कीले स्वास्थ्य संस्थामा बत्ती नभएकाले उपकरण ल्याएर पनि प्रयोगमा ल्याउन गाह्रो हुने बताए । उनले भने, “दुर्गममा चिकित्सक आउन नमान्नुको मुख्य कारण उपकरण, स्रोतसाधन नभएरै हो । स्वास्थ्यसंस्थामा पनि छ वर्षपछि म आएको हुँ । यहाँ बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने भए रिफर गर्न साधन छैन । एम्बुलेन्स नहुदाँ अझ धेरै समस्या छ । जसले गर्भवतिलाई धेरै गाह्रो भएको छ ।”
पहिला चिकित्सक बन्नुको उद्देश्य असह्य बिरामीलाई उपचार गर्नु वा समाज सेवा गर्नु भन्ने थियो ।
सरकारले हरेक वर्ष दुई सयको हाराहारीमा छात्रवृत्तिका एमबिबिएस चिकित्सक उत्पादन गर्छ भने निजी लगानीमा त करिब दुई हजार जति चिकित्सक उत्पादन हुन्छन् । सल्लाहकार पौडेलले स्वास्थ्य केन्द्रमा उपकरण पु¥याउनका लागि मन्त्रालयले तत्कालका लागि ९६ करोड छुट्याएर उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिए ।
Tags : सरकार स्वास्थ्य